Meel udhaxeysa SPAM iyo Been Abuur Layaab Leh | Martech Zone
Isniin, Maarso 26, 2018 Talaado, Maarso 27, 2018 Douglas Karr
Toddobaadyadii ugu dambeeyay waxay ii ahaayeen indho furan oo la xiriira fadeexadaha xogta ee lagu soo warramey wararka guud. Waxaan si daacad ah u la yaabay qaar badan oo asxaabteyda ka mid ah warshadaha iyo falcelintooda jilibka iyo jawaab celinta sida xogta Facebook loo goostay loona isticmaalay ujeeddooyin siyaasadeed intii lagu jiray ololihii ugu dambeeyay.
Qaar ka mid ah Taariikhda Ololaha Madaxweynaha iyo Xogta:
2008 - Waxaan la yeeshay sheeko la yaab leh injineer xog ah oo ka tirsan ololihii ugu horreeyay ee Madaxweyne Obama kaasoo la wadaagay sida ay u gurteen iyo sida ay u iibsadeen xogta. Doorashadooda koowaad way adkayd, Xisbiga Dimuqraaddiguna ma sii deyn doono liisaska deeq bixiyaasha iyo taageerayaasha (illaa iyo inta laga gaarayo doorashada hordhaca ah). Natiijadu waxay noqotay in ololuhu isku dubba riday, isku dubariday, oo la dhisay mid ka mid ah bakhaarradii xogta ugu yaabka badnaa taariikhda. Aad bay u fiicnayd in bartilmaameedsigu uu hoos ugu dhacay heer xaafadeed. Isticmaalka xogta, oo ay ku jiraan Facebook, ma ahayn wax kafiican xarrago - waxayna fure u ahayd guuleysiga hordhaca.
2012 - Facebook wuxuu si toos ah ula shaqeeyay ololihii Madaxweyne Obama iyo, waxay umuuqataa in xogta la dulsaaray wixii kafilayay cidkasta oo filaysay inay soo bandhigto codka ayna gacan ka gaysato sidii loogu guuleysan lahaa Madaxweynaha doorashada labaad.
2018 - Iyadoo la adeegsanayo weriye sir ah, Cambridge Analytica ayaa looga baxay shirkad ahaan ka faaideystay awoodaha xogta Facebook si looga faa'iideysto tiro xaddidan oo xog ah.
Hadda, runta haddii loo sheego, labadii olole ee ugu horreeyay waxaa laga yaabaa inay isku dubbariday Facebook (xitaa waxaa jiray isku soo dhawaansho u dhexeeya ololaha iyo xubnaha guddiga Facebook). Anigu ma ihi qareen, laakiin waxaa su'aal ka taagan tahay in dadka isticmaala Facebook ay ogolaadeen iyo in kale adeegsiga macluumaadka noocan ah iyada oo loo marayo shuruudaha Facebook. Ololihii madaxweyne Trump, waxaa si cad u muuqata in farqigaas la adeegsaday, laakiin weli waxaa su'aal ka taagan tahay in sharciyada la jabiyay iyo in kale.
Furaha qaar ka mid ah tan ayaa ah in kastoo dadka isticmaala laga yaabo inay kaqeyb qaateen barnaamijyo ayna bixiyeen ogolaansho ay kuhelaan xogtooda, hadana xogta asxaabtooda internetka ayaa sidoo kale la goostay. Siyaasadda, maahan wax cusub in dadka leh aragti siyaasadeed oo isku mid ah ay isugu soo baxaan khadka tooska ah… marka xogtani waxay ahayd macdan dahabi ah.
Tani ma aha boosteejo siyaasadeed - aad uga fog. Siyaasaddu waa mid ka mid ah wershadaha ay xogtu gabi ahaanba muhiim ka noqotay ololeyaasha. Waxaa jira laba bartilmaameed oo loogu talagalay ololaha noocan ah:
Cod-bixiyeyaasha aan danaynayn - ku dhiirigelinta asxaabta iyo asxaabta si loogu dhiirrigeliyo cod-bixiyeyaasha aan naxariista lahayn inay soo baxaan oo ay codeeyaan waa istaraatiijiyad aasaasi ah ee ololahan.
Codbixiyeyaasha aan go'aan laga gaadhin - Cod-bixiyaasha aan go'aan ka gaarin waxay caadiyan u janjeeraan hal jiho ama dhinac kale, sidaa darteed helitaanka farriimaha saxda ah hortooda waqtiga saxda ah waa muhiim.
Waxa xiiso leh, labada nooc ee codbixiyayaashu waa boqolkiiba aad iyo aad u yar. Inteena ugu badan ayaan ognahay habka aan u codeyno wax yar ka hor doorasho kasta. Furaha ololahan ayaa ah aqoonsiga jinsiyadaha maxalliga ah ee ay jirto fursad lagu guuleysto, iyo raacitaanka labadaas qaybood sida ugu macquulsan haddii ay dhacdo haddii aad dhiirrigelin karto oo aad ku wareejin karto codkooda. Xisbiyada qaranka xitaa ma soo bandhigaan goobaha ay ku kalsoon yihiin inay guuleysan doonaan ama laga badin doono states waa gobolada lulaya ee ay bartilmaameedsanayaan.
Iyada oo doorashadan ugu dambeysay ay tahay mid aad u kala qeybsan, la yaab ma ahan in hanaankii hadda loo qodayo loona baarayo sidan. Laakiin runtii waxaan su'aal ka qabaa carada kuwa weeraraya istiraatiijiyada iyo mea culpas ee kuwa la qabtay. Qof kasta oo aqoon u leh siyaasadda wuu fahamsan yahay sida xogta muhiimka ahi u noqotay. Qof kasta oo ku lug lahaa wuu ogaa waxa ay sameynayeen.
Mustaqbalka Xogta Suuqgeynta iyo Asturnaanta
Macaamiisha (iyo, kiiskan codbixiyayaashu) waxay rabaan shirkadaha (ama siyaasiyiinta) inay si shakhsi ah u fahmaan. Dadku way quudhsadaan tiro badan oo ah spam iyo xayeysiisyo xayeysiis ah. Waan neceb nahay xayeysiisyada siyaasadeed ee aan joogsiga lahayn ee buuxiya fiidkeennii oo horseed u ahaa olole.
Waxa ay macaamiishu runti rabaan waa in la fahmo oo toos loola socodsiiyo. Waxaan gabi ahaanba ognahay tan - ololeyaal shaqsiyadeed iyo shaqooyin bartilmaameed ku saleysan xisaab. Shaki iigama jiro inay ka shaqeyso siyaasada sidoo kale. Haddii qof haysta laba caqiido oo bidix u janjeera oo ay la kulmaan xayeysiis taageeraya oo ay ku raacsan yihiin, wuu jeclaan doonaa oo la wadaagi doonaa. Sidoo kale qof u janjeera midig.
Si kastaba ha noqotee, hadda macaamiisha ayaa la dagaallamaya. Waxay neceb yihiin ku xadgudubka kalsoonida ay siiyeen Facebook (iyo barnaamijyo kale). Waxay quudhsadaan ururinta dabeecad kasta oo ay internetka ku qaataan. Suuqge ahaan, tani waa dhibaato. Sideen shakhsi u gaarsiin karnaa fariinta uguna gudbin karnaa si wax ku ool ah adiga oo aan idin aqoon? Waxaan u baahanahay xogtaada, waxaan u baahanahay inaan fahamno dabeecadahaaga, waana inaan ogaano inaad rajo leedahay. Waxaad u maleyneysaa inay tahay wax cabsi badan… laakiin beddelka ayaa ah annaga oo khiyaanaynayna wax walba oo ka baxsan qof walba.
Tani waa waxa dhacaya marka loo eego Google (oo qariya xogta dadka isticmaala diiwaangashan) waxayna noqon kartaa waxa ku dhacaya Facebook, kuwaas oo horey si aan rasmi ahayn ugu dhawaaqay in helitaanka xogta la xaddidayo. Dhibaatadu sifiican ayey usii fideysaa si ka baxsan siyaasada, dabcan. Maalin kasta waxaan helo boqolaal xiriir ah oo ay i soo direen dad iibsaday xogtayda aniga oo aan fasax iga haysan - gabi ahaanbana ma lihi wax aan dib u helo.
Inta udhaxeysa Spam iyo Creepy waa Transparency
Fikradayda hoose, waxaan aaminsanahay haddii aasaasayaasha dalkan ogyihiin in xogtu sidan qiimo yeelanayso, waxay ku dari lahaayeen wax ka badal lagu sameeyo Sharciga Xuquuqda halka aan ku leenahay xogteena qofkasta oo raba inuu sameeyo wuxuu u baahan yahay ogolaansho la muujiyey halkii soo gurashada annaga oo aan ka warqabin.
Aynu wajahno, riixitaanka dariiqooyinka dariiqooyinka si loo bartilmaameedsado oo loo helo macaamiisha (iyo codbixiyayaasha), waxaan ognahay inaan ahayn kuwo cabsi badan. Dib-u-celinta ayaa naga leh. Dib-u-eegisna waa la dareemi karaa sannadaha soo socda.
Ma hubo in ay goori goor tahay in dhibaatada la saxo, in kastoo. Hal xal ayaa xallin lahaa waxaas oo dhan - daahfurnaanta. Ma aaminsani in macaamiisha ay si dhab ah u xanaaqsan yihiin maxaa yeelay waa xog la adeegsanayo Qofna uma maleynayo in qaadashada kedis siyaasadeed ee Facebook ay u sii deyneyso xogtooda dhinacyada saddexaad si loo iibsado loona bartilmaameedsado olole siyaasadeed oo qaran. Hadday sidaas yeeleen, ma aysan riixeen wax caadi ah markay weydiiso inay la wadaagaan xogtooda.
Ka waran haddii xayeysiin kasta ay bixiso aragti ku saabsan sababta aan u fiirineyno? Kawaran haddii emayl kasta uu bixiyo aragti ku saabsan sida aan ku helnay? Haddii aan ku wargelinno macaamiisha sababta aan ula hadlayno iyaga oo leh farriin gaar ah waqti cayiman, waxaan ku rajo weynahay in macaamiisha badankood ay u furnaan doonaan. Waxay u baahan doontaa inaan barno rajooyinka oo aan ka dhigno dhammaan geeddi-socodkeenna mid hufan.
Rajo kama qabo inay taasi dhici doonto, in kastoo. Taas oo kaliya u horseedi karta spam badan, wax badan oo cufan… illaa iyo inta ugu dambeysa ee warshadaha la xakameynayo. Waxaan soo marnay qaar ka mid ah hada kahor Ha Dirin iyo Ha Wicin liisaska.
Waana muhiim in la ogaado in ay jirtay hal ka dhaafid ah kantaroolkaas sharciyeynta… siyaasiyiin.
Tags: falanqaynta cambridgexogta macaamiishaboodhDataxogta doorashadadoorashooyinkaFacebookobamadoorashada obamagaarka ahspambartilmaameedkadaahfurnaantabuunkadoorashada trump
Barroosinka: Bilaash, Fudud, Podcasting-saaxiibtinimo-Podcasting